Pet Cold Beverage Cup Vagadziri - China PET Cold Beverage Cup Fekitori & Vatengesi
COPAK'S PET Makapu ari 100% kutevedzera iyo Chikafu giredhi. Maitiro ese ekugadzira apera mumusangano isina guruva isina yakachena. Uye copak yapfuura FDA / BRC / QS / SGS / LFGB / ISO9001 Certification.
COPAK-PET Mukombe ndeyekutaridzika kwakanaka, kusimba kwenguva refu, yakachengeteka kushandiswa, ine hutano kune chikafu giredhi. 100% BPA yemahara uye isina chepfu. Kapu yedu yePET inokwezva kune vese vadiki nevakuru vanhu nekuda kwechitarisiko chavo chemafashoni.
PET Mukombe 12oz
1.Color: Crystal-yakajeka kana yakajeka yakadhindwa
4.Kushandisa: Zvidhakwa zvinotonhorera, Beverage, ice kofi, smoothies, bubble / Boba tii, milkshakes, jongwe jongwe, mvura, masoda uye majusi.
5. Pasuru: 25pcs / sleeve, 20sleeve / CTN
8. Unyanzvi: 12Oz ine 375ml, 340ml kana 350ml
Shanghai COPAK indasitiri Co., LTD inyanzvi kambani yePET mabhodhoro uye PET mukombe muChina. ZvePET CUPS, isu tinazvo PET epurasitiki mukombe nemabhodhi kana pasina lids.
Kana ari makapu ePET, isu tine 5oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 12oz, 13oz, 14oz, 15oz, 16oz, 20oz, 24oz uye zvakadaro. Iyo yepamusoro dhayamita inosiyana kubva ku74mm kusvika 98mm. Ingotiudza saizi uye kugona kwaunoda, isu tinokurudzira iwe chaiyo PET mukombe iwe.
Kana zviri zvivharo, chivharo chinonyanya kufarirwa ndeye DOME muvharo uye yakagadzika LID. Isu tinewo chivharo chakavhurika hafu, chivharo chisina mashanga, huchi hwebheya chivharo zvichingodaro. Ingotiratidza iyo yaunoda. Mutengo unogona kutaurwa pamwe chete nePET epurasitiki makapu.
Rimu redu rePET PLASTIC CUP rinotenderedzwa. Saka muromo wakatsetseka. Iyo yakachengeteka kwazvo kunwa. Mabhodhoro ese akagadzirwa zvinoenderana nePET CUP TOP dhayamita uye muromo.Vanowirirana zvakanaka uye izvi zvinoita kuti pasabudike kapu yedu yePlastiki kapu.
12oz kapu yepurasitiki
Material: PLA uye PET zvinhu
Vhoriyamu: 12oz kapu yepurasitiki 340ml / 350ml kana 375ml
Logo: COPAK kana tsika yakagadzirirwa logo inogamuchirwa
Dhizaini: OEM / ODM
Kubhadhara izwi: T / T; L / C; kumadokero kubatana
Kapu inonyanyo kufarirwa 16oz kapu yepurasitiki ndeyePET zvinhu. Iro vhoriyamu uye saizi ruzivo rwunotevera.
32oz PET mukombe
Kukura: 11.5 * 6.5 * 17.6 / 11.5 * 6.3 * 17.8cm
Vhoriyamu: 32oz, 1000ml
Ruvara: yakajeka kana yakasarudzika ruvara
Nguva yekuendesa: zvinoenderana nezvinodiwa uye huwandu.
Zvitupa: ISO9001, BRC, FDA, LFGB, QS
Zvinyorwa zveedu 30oz PET mukombe iri pazasi,
92mm kapu PET
MuCopak, 92mm PET makapu zvakasainirwa kumavhoriyamu akasiyana siyana. 5oz ne 200ml, 7oz ne200ml, 8oz ne280ml, 9oz ne 275ml, 12oz ne375ml uye 12oz ne360ml, 14oz ne460ml, 16oz ne580ml zvese zvakagadzirirwa kusvika 98mm yepamusoro dhayamita. Kusanganisira asi isina kuganhurirwa kune aya mavhoriyamu uye madhaimendi, unogona kuwana chero saizi uye mavhoriyamu muCOPAK.
95mm PET mukombe
95mm PET kapu inowanikwa muhuwandu hwe8.5oz, 10oz, 12oz, 13oz, 16oz, uye 24oz. COPAK'S95mm PET makapu zvakagadzirirwa kukwana chero 92mm dhayamita muvharo saka kana iwe uchitsvaga epurasitiki makapu ane lids saka copak zvakare ine huwandu hwesarudzo kubva pane zvaunoda. Sarudza kubva pamutsara weflat, dome, kana isina tsvina! Iko kuchinjika kwesarudzo dzevharo ne95mm PET mukombe inobatsira kuchengeta zvinyorwa pasi izvo zvinoita kuti ive yekuwedzera kukuru kune yako yekudyira stock stock.
Yedu yakasarudzika, yakasarudzika mukombe dhizaini "COPAK" yakakwana kune chero chilled bubble tii, michero chinwiwa, mukaka, milkshakes, kofi uye smoothie. Iyo "Yakanaka Nguva" yekudhinda ndeye 360-kwese-kutenderedza uye kunovhenekera zuva rako nemhando dzakanaka dzakashongedzwa pane a 95mm PET mukombe. Yakakwana yekudonha, kana chero nguva yegore! Imwe yeedu anozivikanwa mukombe dhizaini.
98MM PET makapu
COPAK'S 98mm PET makapu zvakagadzirirwa kukwana chero 98mm dhayamita muvharo saka kana iwe uchitsvaga epurasitiki makapu ane lids saka copak zvakare ine huwandu hwesarudzo kubva pane zvaunoda. Sarudza kubva pamutsara weflat, dome, kana isina tsvina! Iko kuchinjika kwesarudzo dzevharo ne98mm PET mukombe inobatsira kuchengeta zvinyorwa pasi izvo zvinoita kuti ive yekuwedzera kukuru kune yako yekudyira stock stock.
MuCopak, 98mm PET makapu zvakasainwa kumavhoriyamu akasiyana siyana. 12oz ine 360ml, 14oz ine 400ml, 16oz ne500ml, 20oz ne610ml, 24oz ine 690ml uye 700ml zvese zvakagadzirirwa kusvika 98mm yepamusoro dhayamita. Kusanganisira asi isina kuganhurirwa kune aya mavhoriyamu uye madhaimendi, unogona kuwana chero saizi uye mavhoriyamu muCOPAK.
BPA Mahara epurasitiki Makapu
Bisphenol A (BPA) is organic synthetic compound pamwe nemakemikari fomura (CH3) 2C (C6H4OH) 2 iri eboka rezvipenga zve diphenylmethane uye bisphenols, iine mahydroxyphenyl mapoka. Iyo yakasimba isina kuchena iyo inonyungudika mu organic solvents, asi isina kusimba soluble mumvura (0.344 wt% pa 83 ° C).
China PET Mukombe
Shanghai Copak indasitiri.
Zvigadzirwa zvikuru zveCOPAK mabhodhoro eChina PET,China PET mukombe, Midziyo yePET, PET tireyi. Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa pakudya, chinwiwa, michero, Hardware, toyi, zvigadzirwa zvemaoko, zvipoda, chipo, mushonga, chigadzirwa chine hutano, zuva nezuva chinodikanwa uye mapepa emahofisi Unogona kuwana chero chaunoda mukambani medu.
China PET Mukombe mugadziri
Shanghai COPAK, inozivikanwa se china PET kapu inogadzira, yakavambwa muna 2010. Makapu ePET eCOPAK anozivikanwa nekusimba uye kugona kwayo mukusimbisa kuravira kwechigadzirwa, magadzirirwo uye chitarisiko. Icho chisarudzo chakanakisa uko kujekesa kwemukombe kunowedzera kutaridzika kwezviri mukati maro.
Yedu PET makapu anoshandiswa kwema smoothies, majusi, iced kofi, hutano hunodedera, madhiri, nati uye musanganiswa wemichero, confectionery, yakavhenganiswa nechando chakapwanyika, zvinwiwa uye zvinwiwa zvinodhaka.